श्रीमान विदेशबाट फर्कँदा १४ वर्षको कमाइ लिएर श्रीमती फ’रार,छोरा र श्रीमानको बि’चल्ली(भिडियो हेर्नुहोस्) – GALAXY
श्रीमान विदेशबाट फर्कँदा १४ वर्षको कमाइ लिएर श्रीमती फ’रार,छोरा र श्रीमानको बि’चल्ली(भिडियो हेर्नुहोस्)
वैदेशिक रोजगारिले किन भित्रीदै छ हाम्रो देश नेपालमा अनेकौ बि’कृ’ती, देशको क’म’जोर आर्थिक अबस्था अनि यहाको बढ्दो बे’रोजगारिका कारण नेपाली युबाहरु आफ्नो जन्मभुमी छाडेर बिदेशिन बा’ध्य छ्न ।
घर परिवारमा केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशाले बिदेशिन बाध्य नेपाली युबकहरुको अबस्था सुध्रिनुको सट्टा झन ब’त्त’र भइरहेको छ । बैदेशिक रोजगारिको क्रममा श्रीमान बिदेशिदा यता श्रीमतिको कु’क’र्मका घटनाहरु पछिल्लो समय सामान्य बन्दै गएका छ्न । आजको घ’ट’ना यस्तै एक बिषयमा आधारित छ ।
घरपरिवार अनि श्रीमतीका लागि भनेर कतारमा १४ बर्षदेखि खु’न प’सि’ना एक गरि परिश्रमका साथ धन कमाएका झापाका कचनाकबल गाउपालिका घर भएका दिलिपकुमार मगर नाम गरेका एक पुरुषकि आफ्नै श्रीमतीले आज उनलाइ म’र्नु न बा’च्नुको स्थितिमा छा’डे’र गएकिछिन ।
अर्काको देशमा साठी डिग्री घाम खे’पेर १४ बर्ष दु’ख गरेर कमाएको उनको सम्पतिसहित आज उनकी श्रीमती उनलाइ छा’डेर फ’रा’र भएकि छिन । साउन ८ गतेदेखि साथिसग बेङ्लोर घुम्न जान्छु भनेर हिडेकी उनकी श्रीमतीको आजको दिनसम्म पनि कुनै अ’त्तो’प’त्तो छैन । दिलिप केही उपाय नलागेपछी मिडियामा आउन बा’ध्य भएका छ्न ।
साउन ८ गते देखि घर छाडेकि उनकी श्रीमती अगस्ट २२ तारिखका दिनदेखि भने सम्पर्कमा पनि आउन छाडेको कुरा पनि दिलिपले बताए । कैयौंपटक फोन गर्दा पनि नउठाको तर एकपटक त्यही २२ तारिखका दिन भने भिडियोकलमार्फत सामान्य कुराकानी भएको पनि उनले बताए । कलमा उनकी श्रीमतीले ईन्डिया छु मात्र भनेको तर कुन ठाउ भनेर स्पष्ट नखुलाएको कुरा पनि उनले बताए ।
अझ अचम्मको कुरा त उनिहरुको प्रेम बिबाह भएको हो । जसलाइ आफ्नो जिन्दगी सोचेर उनकै लागि भनेर यति धेरै दु’ख गरेका दिलिपमाथी के गुज्रीरहेको होला भनेर त हामी अनुमान पनि लगाउन सक्दैनौ । १४ बर्ष अर्काको भुमिमा दु’ख गरेर पनि फेर्न पाएनन उनले चैनको सास, घर आएको एक महिना पनि मज्जाले भएको छैन न घरमा श्रीमती न त दु’ख गरेर कमाएको सम्पती । क’ठै दिलिप !
श्रीमती भनेपछि हुरुक्कै हुदारहेछ्न दिलिप तर के गर्नु यो स्वा’र्थी सन्सारमा जसलाइ धेरै माया अनि बिश्वास गरिन्छ उनैबाट धो’का पाइन्छ । चौ’प’ट्टै माया गर्दारहेछ्न उनी श्रीमतीलाइ, श्रीमतीको बारेमा यस्तो क’र्तु’त सुनेर ५ दिनसम्म त खाना पनि खाएनछन उनले । भो’क न नि’न्द्रामा भएछ्न उनी । क’ठै ! यसो भने उनले “जिन्दगी कस्तो बनाइदिएछ मेरो, घरीघरी त संसार नै त्या’ग्दि’म झै लाग्थ्यो ।”
युट्युबमा यस्तै प्रकृतीका घटना खुब हेर्दा रहेछन दिलिप । तर दैबको लिला आज उनिमाथी नै यस्तो घ”ट’ना आइपर्यो । उनलाई बिश्वास नै लाग्दैन कि यस्तो समस्या लिएर उनिपनि कुनैदिन मिडियाको सामुन्ने आउनुपर्न्नेछ अथवा उनको जिबनमा पनि यस्तै अ’न’र्थ हुनेछ ।
समय र परिस्थितिले मान्छेलाइ कहाँ देखि कहाँ पुर्याउछ । प्रदेशमा दिनरात नभनी दुख गरेका उनि अब सुन्दर भबिष्यको कल्पना गर्दै फर्किनुपर्ने समयमा आज मनभरि पि’डा बोकेर फर्किन बाध्य छन । श्रीमतीसग सुख साट्ने समयमा आज श्रीमती खोज्दै हिड्न बा’ध्य छन उनी ।
श्रीमतीपनि कतिसम्म क’ठो’र त श्रीमानको जिन्दगीभरिको कमाइ जुन स्वाभाबिक रुपमा उनकै थियो त्यही पैसा लिएर आज उनी फ’रा’र भएकी छिन ।
दिलिपका अनुसार मोटामोटि पन्ध्र बीस लाख रुपैया लिएर फरार छिन उनि । हिरा का’ट्’नु हिराले भनेझै दिलिपले पनि क’ठोर शब्दमा यसो भने ” मेरो सबै धनमाल फि’र्ता दिओस अनि उनको जिबन स्वतन्त्र जिउदा हुन्छ ।” एकरति पनि दया देखाएनन दिलिपले आफ्नी श्रीमतीप्रती, देखाउन पनि कसरी जबकी श्रीमती नै श्रीमती भन्न ला’य’क नभएपछि ।बाकी हेर्नुस तलको भिडियोमा